Abafazi abaqhelekileyo beCowsuede Clog Slipper ekuMgangatho oPhezulu weNtuthuzelo yeenyawo - Goodao Technology Co, Ltd.
I-Classic Women Cowsuede Clog Slipper ekuMgangatho oPhezulu weNtuthuzelo yeenyawo
Umzekelo NO.: BLM0411B
Ezi zitya zendlu yamakhosikazi kaClarks lulongezo olubalulekileyo kwimpahla yakho yokunxiba! Izinto ezithambileyo zibonelela ngemfudumalo kunye nentuthuzelo, ngelixa i-outsole yerabha yomelele ivumela ukukhanya kwangaphandle. Ezi slippers nazo zenza izipho ezinkulu! Ezi slippers zibaleka zincinci. Sincoma uku-odola ubungakanani phezulu, ngakumbi ukuba ubungakanani besiqingatha okanye uneenyawo ezibanzi.
● Ezi slippers zibaleka kancinci. Sincoma uku-odola ubungakanani phezulu, ngakumbi ukuba ubungakanani besiqingatha okanye uneenyawo ezibanzi.
● Hombisa iqhosha kunye nelayini yomthungo.
Intlawulo T / T, L / C EBONWENI
Egqithileyo Uyilo olukhethekileyo lwaseTshayina iNew 2020 yoLuhlu oluPhakamileyo lweZihlangu eziQhelekileyo zoMntu eziHamba ngeZicathulo
Okulandelayo: Ukufika okutsha kweFashoni yokufudumeza ebusika ngokuQhelekileyo kwesiQinisekiso seSikhumba seMoccasins kwabasetyhini
Izitayile zesitayile seClog
Fel Clog Slippers